सामाजिक साझेदारी तथ्या |्क | Martech Zone
आइतबार, अक्टोबर 16, 2011 बुधबार, अक्टोबर 26, 2011 Douglas Karr
मैले भर्खर प्रयोगको बारेमा लेखेको थिएँ तपाईंको अवतरण पृष्ठहरूमा सामाजिक साझेदारी, त्यसैले यो इन्फोग्राफिकको समय राम्रो हुन सक्दैन। नम्बरहरू कसरी सामाजिक तपाईंको ब्रान्डको दृश्यता अनलाइन प्रभाव पार्दै छन् आश्चर्यजनक छन्। अन्य माध्यमहरू जस्तो नभई, हामी निरन्तर फेला पार्दछौं कि सामाजिक साझेदारी प्रासंगिक सामाजिक नेटवर्कहरू मार्फत शब्द फैलाउनको लागि उत्कृष्ट अवसर हो। एक सामाजिक साझेदारी को अलावा मुखको शब्द को फाइदा पनि मिल्छ समर्थन.
यो थप्नुहोस् यो इन्फोग्राफिक प्रदान गरीएको छ, १० करोड भन्दा बढी साइटहरूमा तथ्या re्क जारी गर्दै 10 बर्ष भन्दा बढी १.२ अरब मानिस पुग्छन्! मेरो लागि कुञ्जी टेकवे भनेको sharing: .० बिहानको पीक सेयरि time् समय हो। जब तपाइँ तपाइँको साझा रणनीति को माध्यम ले काम गर्नुहुन्छ, तपाइँ दर्शकहरूको समय क्षेत्र विचार गर्न चाहानुहुन्छ जुन तपाइँ पुग्न चाहानुहुन्छ!